Esi zọpụta ugu n'oge oyi - Ugu - 2019
Taa, enwere ọtụtụ ụdị pumpkins, Onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ iri atọ nke iche na-eto eto. Ajụjụ a bụ maka nchekwa nke mkpụrụ osisi a dị ụtọ ma dị mma. Ogologo oge na n'ọnọdụ ndị dị aṅaa ka a ga-echekwa ya, ụdị dị iche iche kachasị mma maka nke a - anyị ga-ahụ n'isiokwu a.
Otu esi echekwa ugu, usoro ihe ubi
Ọnọdụ nchekwa ọnọdụ maka ugu
Ebee ka ugu kacha mma
Enwere m ike ịchekwa otu ugu n'ime ụlọ obodo, iwu maka ichekwa ihe oriri dị mma n'ụlọ?
Atụmatụ na aghụghọ na esi echekwa obere ube
Kedu ụdị ugu kacha mma maka nchekwa
Ihe kachasị mma ma gbanwee maka nchekwa nchekwa ogologo oge nke ugu iche ndị nwere ubi ubi nwere ike ịkpọ ndị a:
"Kherson". Ihe dịgasị iche iche nwere ogologo ndụ ndụ ugu. Nke a bụ ugu nwere nnukwu akpụkpọ anụ nke nwere ma ibe ma ọ bụ tụrụ. Peel na-enweghị dents na bumps, ọdịdị nke a ugu - a flattened obi ụtọ. Anụ ahụ nke dịgasị iche iche bụ anụ ahụ, nke na-atọ ụtọ na ụtọ, ụtọ shuga.
"Na-echere". Mgbochi ma ọ bụ nke buru ibu dị iche iche n'oge dị iche iche, oval. Egwu a na-acha odo odo na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ, o nwere anụ ahụ siri ike na akpụkpọ anụ. Ụdị dịgasị iche iche nke na-agafe njem, adịghị enwe ọrịa.
"Slavuta"Ọdịiche dịgasị iche iche nke ọkara nha, nchacha nke ugwo na njedebe nke oge ahụ. Mkpịsị na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ siri ike, ma anụ ahụ dị ọcha, ọ bụghị ike, sweetish." Slavuta na-eguzogide ọrịa.
"Mozolievskaya 15". Mkpụrụ osisi dị iche iche nwere ọdịdị oval na nkwonkwo ọma. Achịcha bụ oroma, anụ ahụ dị nro na nke rụrụ, na-atọ ụtọ uto.
"Yanina". A na-eji nke a dịgasị iche iche maka imepụta ngwaahịa nri. Oval ogwu, ntakịrị ribbed, oroma ocha na-acha akwụkwọ ndụ specks. Anụ ahụ dị oke, na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ. Ụdị dịgasị iche iche enweghị ntụpọ.
"Arbat". Ugu dị n'ụdị cylinder, acha edo edo. Ụdị dịgasị iche iche bụ oge, ụtọ.
"Gileada". Ụdị agba sitere na odo-ocha ka pinkish. Ugu na mkpa bee na crispy, kemmiri pulp.
"Polyanin". Ezi ugu na okpo puls, nwere ụdị nke cylinder, agba nke anụ ahụ bụ aja aja. Ihe dịgasị iche iche dị mma.
Otu n'ime ihe ndị mere na ugu na-eregharị n'oge nchekwa bụ na-akwadoghị iwu nke owuwe ihe ubi. Mgbe ị na-egbute ugbo, cheta na mkpụrụ osisi ahụ anaghị anabata mgbanwe na okpomọkụ. Pumpkins na-amalite ịchịkọta mgbe agba nke mkpụrụ ahụ na-aghọ nke jupụtara na ya, akpụkpọ ahụ dịkwa ike. Ọ bụ ihe amamihe dị na nchịkọta mkpụrụ niile tupu ntu oyi, ihe oriri ga-eme ka okpomọkụ dị elu -5 Celsius, ma ọ bụghị ala. A kpochapụrụ akpụkpọ anụ na-ebu nkọ, na-ahapụ obere ọdụdụ.
Ahịrị ga-aghọ osisi na oge, a ga-edebekwa ugu, n'enweghị ọnyá na-emeghe, ga-adị ogologo oge. Mgbe ị na-anakọta mkpụrụ osisi, gbalịa ka ị ghara imerụ ha; mmebi ngwaọrụ bụ ụzọ ziri ezi na microorganisms purulent. Kedu otu esi etinye ugu n'oge njem? Ebe ebe ugu ahụ ga - adị na njem, ọ dị gị mkpa iji ihe dị nro dakwasị n'akụkụ niile, dịka ọmụmaatụ, ịchapu, mkpụrụ ahụ na-etinyekwa na mpempe akwụkwọ.
Tụlee isi ihe nke otu esi echebe ugu maka oyi. Ghọta pumpkins tupu nchekwa, jigide n'ime ụlọ nke iru mmiri ruo 90% na okpomọkụ ruo +28 Celsius. N'ọnọdụ dị otú ahụ, nwa ebu n'afọ ga-agwọ ọrịa, ma ọ bụrụ na ọ bụla, na usoro ndụ ga-akwụsị, nke ga-enyere aka nchekwa ya. Ebe nchekwa kachasị mma maka pumpkins sitere na +3 ruo +15 Celsius, iru mmiri abụghị ihe 80%.
Ị ma? Ugu sitere Mexico. N'akụkụ ya, ndị ọkà mmụta ihe ochie achọtala mkpụrụ osisi a n'ihe dịka puku afọ asaa. Na Europe, osisi ahụ bịara mgbe nchọpụta nke America, ma si ebe ahụ gbasaa gaa ná mba ndị ọzọ na ebe ndị ọzọ.
Ebe kacha mma maka ịchekwa pumpkins bụ okpuru ulo ma ọ bụ okpuru ulo. Kedu esi echekwa pumpkins maka oyi n'ime okpuru ulo? Tụlee nkọwa niile. Ụlọ ahụ kwesịrị ịdị ọkụ ma dị ọcha, ọ dị mma, ma ọ bụrụ na o nwere shelves ma ọ bụ ikpo okwu maka ichekwa pumpkins. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ịnwere ike ịme ihe ngebichi oge nke mbadamba. Doo ala na akwukwo ma obu burlap.
Ọ dị mkpa! Ị pụghị ichekwa pumpkins, wụsara n'ime ikpo. Mkpụrụ ekwesịghị imetụ aka.
A ghaghị ịkwanye Pumpkins n'ebe dị anya site na ibe ya, ga - ebido. Maka nchekwa dị mma na-etinye ahịhịa na mkpụrụ.
Ihe ime ma ọ bụrụ na ọ dịghị okpuru ulo - debe ugu ahụ n'ụlọ ahụ. Enweghị nsogbu ọ bụla na nke a. Mkpụrụ nwere ike ịchekwa na mbara ihu ma ọ bụrụ na ọ na-acha ọkụ ma dị ọkụ n'ebe ahụ. N'ihi oyi ahụ, ọ bụrụgodị na ị na-ekpuchi mkpụrụ osisi ahụ na-ekpo ọkụ, ugu ga-akwata. Nhọrọ kachasị mma bụ idebe ya n'ime ụlọ n'okpuru akwa ma ọ bụ n'ime ụlọ ndozi. Mkpụrụ agaghị adị n'akụkụ batrị na ngwaọrụ ndị ọzọ na-ekpo ọkụ. Ọ dị ha mkpa ịgbasawanye ka ha ghara imetụ n'akụkụ ibe ha; ọ bụghị ihe ọjọọ itinye mkpụrụ ọ bụla n'ime akwụkwọ akụkọ.. Mgbe mmiri na-ehicha ụlọ tupu ịsaa n'okpuru akwa, wepụ mkpụrụ osisi ahụ ma debe ya naanị na ala akọrọ kpamkpam.
Ntị! Lelee site n'oge ruo n'oge ọnọdụ nke pumpkins. Ọ bụrụ na achọpụtala ọkpụkpụ nke ire ere, a ghaghị iwepụ ya ozugbo ka mkpụrụ ndị ọzọ ghara ịrịa ọrịa.
Ọ na - eme na mgbe nchekwa nchekwa ahụ na - eto n'ime, ajụjụ ahụ kpatara: ọ ga - ekwe omume iri ya. A gaghị atụ aro mkpụrụ osisi dị otú a: mkpụrụ osisi germinated na ya nwere alkaloids na ha mejupụtara. Nchekwa n'ime ụlọ nchekwa adịghị iche na ọnọdụ nchekwa dị n'okpuru akwa. Ihe bụ isi bụ na ọ dịghị ntụpọ, ọ bụ ọchịchịrị, ọkụ na nkụ.
Enwere ike ịchekwa ogbe na mpempe akwụkwọ. Iji mee nke a, a na-egbutu anụ nke mkpụrụ osisi ahụ na sentimita ise ma kpochaa ya. Ị nwere ike ịchekwa na ebe a na-eji ihe eji eme ihe, gbanwere ya na akwụkwọ e ji akpụkpọ anụ mee ma gbanye ya n'ime mmiri, ma ọ bụ n'ime friji. Ugu nwere ike ịchekwa oyi. Grate, kpochapu ya ma jiri ya rie nri, tinye aka n'ime akpa ma ọ bụ igbe.
Ịnwere ike ịchekwa kichin sliced ​​ọhụrụ n'ime ngwa nju site na itinye ya na foil, nke a ga-eme ka ndụ gị dịkwuo ogologo, ma ọ bụrụ na ị na-ejikọta ya na mmanụ ndị na-edozi ahụ, anụ ahụ ga-anọgide na-atọ ụtọ ma dị ọhụrụ ruo ogologo oge. Ugu nwere ike ịmịchaa maka nkà ọ bụla. Iji mee nke a, a na-ehicha ya ma tinye ya n'ọchịchịrị ruo mgbe ọ ga-ehicha. Otú ọ dị, tupu etinyechaa ihicha, ọ bụ ihe na-achọsi ike na-emeso ugu n'ime ụlọ ngwongwo ka ọ ghara ire ere.
Mmasị N'obodo Germany nke Ludwigsburg kwa afo na mmalite nke mgbụsị akwụkwọ a na-eme ememme ugu. Mkpụrụ nke ụdị dị iche iche na nha si n'akụkụ nile nke Germany na-eweta oriri ahụ. Akụkụ kasị amasị nke ememe ahụ bụ ihe ngosi nke ihe osise si na mkpụrụ osisi ugu na ụdị aka dị iche iche.
Ugu - mkpụrụ osisi bara uru, ọ nwere ọtụtụ carotene na ihe ndị ọzọ bara uru nke ahụ chọrọ. Ọ bụrụ na ị maara ebe na otu esi echekwa anụ ndị na-ekpo ọkụ n'oge oyi, ị nwere ike iri ngwaahịa a dị mma n'afọ niile.
Na-etolite na radish na griin haus: mgbe ha ga-akụ ihe oriri n'uzo ziri ezi ma gini ka oge a na-adabere?
Lily Saranka nke a nụchara anụcha na nke a na-atụghị anya ya: (foto, kinky): foto na atụmatụ nke nlekọta ụlọ
Nkọwapụta na foto nke ụdị njedebe nke ala
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Ọnọdụ nchekwa maka pumpkins na oyi, otu esi echekwa inine ruo mgbe mmiri